Ogaden News Agency (ONA) – OYSU Open Day oo ka dhacay wadanka UK
OYSU Open Day oo ka dhacay wadanka UK
Posted by ONA Admin	/ April 15, 2013
Ururka dhalinyarada OYSU London ayaa olole xoogan oo dhinaca abaabulka ah ka bilaabay wadanka UK. Abaabulkan oo qaab cilmiyaysan oo casri ah ku socda ayaa waxaa ujeedadiisu tahay dhalinyarada somalida Ogadeniya ee wadanka UK sidii loogu sameyn lahaa adeegyo kala gadisan oo wax tar u leh mustaqbalka dhalinyarada.
mawlaca shirarka ee Jaaliyada Ogaden Community ayaa waxaa isugu yimid dhalinyaro aad u qurux badan oo da’yar u badnaa kuwaas oo shacni aad u qurux badan ka muuqdo.
Caaliya oo gabadh da yar ah ayaa waxa aan weydiinay sababta ay u timid kulankan Open day-ga ah, waxayna noo sheegtay inay muddo dheer xiisaynaysay inay mar uun ku biirto ururka dhalinyarta OYSU. Maata waxaan jaanis u helay inaan kasoo qeybgalo kulankan open dayga ah oo lanagu baray taariikhda dhulkayaga iyo meesha aan kasoo jeedno. Waxa aan si fiican u bartay maanta halganka Ogadeniya iyo kaalinta ani igu aadan ee aan ka qeyb qaadan karo.
Shirka ayaa u bilaabmay qaab qurux badan iyada oo markii hore lasoo bandhigay waxqabadka ururka OYSU, taarikhda dhulka somalida Ogadeniya, dhibaatooyinka gumeysiga, iyo kaalinta ku aadan dhalinyarada ee xubin kastaba ka qaadan karo halganka. Casharadan ayaa waxaa soo jeediyay Gudomiyaha OYSU London mustafe Diirane iyo Ducale iyo Bashiir.
Waxaa xiiso gooni ah lahaa siminaar ku aadan waxyaalaha Ururka OYSU u fulin doono dhalinyarada oo ay soo jeedisay Sagal Cabdullaahi. Sagal oo uga faaideynaysa dhalinyarada da yarta ah aqoonteeda professionalka ah ayaa sheegtay in ururku da’yarta xoog badan lagalin doono gaar ahaan da yarta ku jirta dugsiga fasalada 7aad illaa fasalada 10aad oo laga caawin doono waxbarashada. iyada oo waalidkood lasiin doono talooyin ku aadan sida ugu habboon ee ilmahooga waxbarasho fiican u heli lahaa uguna guulaysan lahaa imtaxaanaadka.
waxaa kale oo iyana xoog badan lagalin doona dhalinyarada ku jirta Collegeyada ama dhigta A levelka oo laga caawin doono qaabka ugu sahlan ee natiijo fiican ku heli lahaayeen jaamacado ku habboon iyo doorasho fiicana ay ku sameysan lahaayeen. Dhinaca kale waxaa caawimaad buuxda lasiin doona dhalinyarada kasoo baxday Jaamacadaha ee raadsanaya shaqada, ama qofkii shaqeynayay balse hada shaqo aan heynin amaba raba innuu badasho shaqadiisa. Talooyinkan oo ururka dhalinyarada ay iskaashato badan lasameyn doonaan.
kulankan oo aad loosoo buuxdhaafiyay ayaa maalinki kowaadba waxaa la qoray xubno aad u tiro badan oo xubinimo buuxda ka qaatay OYSU halka xubnihi kale ay yimaadeen iyana buuxiyeen liiska taageranimo. Waxaana dadka loo kala qeybiyay xubin buuxa iyo xubin heer taageranimo. xubinka heer taageranimo ayaa ka sokoeynin xubin buuxa.
Qorshahan Open day ayaa soconaya bishan April oo dhan iyada oo markale dib la isugu soo laaban doono 20 iyo 27 April 2013.